Noho ny faharatsian’ny toetr’andro : 20 % ihany, raha be indrindra, ny vokatry ny vary aloha | NewsMada
Noho ny faharatsian’ny toetr’andro : 20 % ihany, raha be indrindra, ny vokatry ny vary aloha
Ratsy ny voka-bary noho ny faharatsian’ny toetr’andro, tsy fahampian’ny orana. 20% ihany, raha be indrindra, ny vary aloha tokony hamatsiana mandritra ny maitsoahitra amin’ity. Noho izany, andrasana ny fanafarana vary avy any ivelany hamenoana ny tolotra tsy ampy. « Tsy misy olana aloha, hatreto, ny tahiry amin’ny ankapobeny fa mety hisy olana ny any amin’ny faritra Atsimo Andrefana sy Anosy, tsy manana tahiry afa-tsy eo amin’ny fito herinandro », hoy ny minisitry ny Varotra, Tazafy Armand. Koa nentanina ireo mpandraharaha, nifampidinika tamin’ny minisiteran’ny Varotra, omaly, hanampy izany tahiry izany.
Mampanahy, ankehitriny, ny fanararaotana ataon’ny sasany, hampiakatra ny vidim-bary. Hita taratra izany izao any amin’ny faritra Ambatondrazaka, noho ny tahiry tsy avoakan’ny sasany. Koa tsara raha tsy maintsy raisina ny fepetra hisorohana izany. Hatao izay hiparitahan’ny vary, ary efa nifampiresahan’ny minisiteran’ny Varotra tamina mpandraharaha maro izany. “Hisy ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana raha misy tratra manafim-bokatra sy manao spéculation amin’ny vidiny”, hoy ny minisitry ny Varotra.
Hampitomboina ny vokatra hafarana
Antony roa ihany ny mampiakatra ny vidim-bary : tsy ampy ny eny amin’ny tsena noho ny famatsiana tratra aoriana na fanararaotana fampiakarana ny vidiny. Vahaolana ny tsy hahatapaka ny famatsiana. Manodidina ny 30.000 t isam-bolana ny vary hafarana avy ivelany ho an’ny Nosy manontolo. Noho ny tsy fahampian’ny vary aloha anefa, tsy maintsy hampitomboana ny vokatra hafarana. Mpanelanelana manamora ny asan’ireo mpandraharaha ny fanjakana.
Tsy midika ho gaboraraka anefa izay fanamorana ny asan’ny mpandraharaha izay, ohatra, ny famoaham-bokatra any amin’ny fadintseranana. « Olana fantatra matetika, mivarotra avy hatrany ireo mpandraharaha, tsy miandry fahazoan-dalana mivarotra izany any amin’ny mpanjifa. Tsy mahazo esorina ao amin’ny trano fitahirazam-bokatra ireny vary ireny raha tsy mahazo alalana avy amin’ny minisiteran’ny Varotra », hoy ihany ny minisitra. Nisy izany ny fifampiresahana, koa enga anie hisy ny fanarahan-dalàna. Ny hita mantsy amin’ny sehatra maro, matetika ny Malagasy ihany no mambotry ny mpiray tanindrazana aminy.